Ahoana ny fomba hamoronana sary famantarana amin'ny Adobe Illustrator tsikelikely | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | sary, Tutorials
Ny logo dia iray amin'ireo singa hita maso indrindra amin'ny marika iray, afaka mamindra amin'ny besinimaro hoe inona ny fotony ary marika mahery vaika izy io. Amin'ity lesona ity dia hasehoko anao ireo fitaovana fototra atolotry Illustrator ho an'ny famolavolana logo ary hampianariko anao ny fomba hitrandrahana betsaka indrindra amin'izy ireo. Raha te hahalala ny fomba famoronana sary famantarana miaraka amin'ny Adobe Illustrator ianao dia tsy ho diso anjara amin'ity lahatsoratra ity!
1 Logo, isotype na sary an-tsary
2 Mamorona antontan-taratasy vaovao ao amin'ny Illustrator ary jereo ny maodely
3 Mamorona ny endrika ilaina rehetra ao amin'ny Adobe Illustrator
3.1 Ny vatan'ny vorondolo
3.2 Ny mason'ny vorondolo
3.3 Ataovy avo roa heny ary atsimbadika hamoronana ilay maso hafa
3.4 Mamorona elatra amin'ny alàlan'ny mpandeha lalana na penina
4 Loko sy gradient ho an'ny logo anao amin'ny Illustrator
5 Typografika amin'ny sary famantarana
6 Fomba fanamboarana endritsoratra amin'ny Adobe Illustrator
7 Hizaha toetra ny logo miaraka amin'ny fanesoana amin'ny Photoshop
Logo, isotype na sary an-tsary
Raha ny mahazatra dia mampiasa ny teny hoe logo isika hanondroana ny marika maneho ny marika. Saingy, io teny io dia tsy nampiasaina tsara. Alohan'ny hanombohantsika mamolavola dia andao hamafana izany.
El Logo dia ilay marika maneho ny marika ary voaforona sary sy lahatsoratra (na typografika).
Rehefa ny tandindona dia tsy misy afa-tsy sary, tsy misy lahatsoratra, marina kokoa ny fampiasana ilay teny modely.
Misy ny marika izay indraindray mampiasa ny faritra samihafa amin'ny sary famantarana azy tsy miankina. Ohatra, i Nike dia matetika no soloin'ny Swoosh. Rehefa mifandray amin'ny marika ny sary famantarana raha tsy mila miaraka amin'ny typografika isika dia afaka miantso azy hoe sary an-tsaina.
Mamorona antontan-taratasy vaovao ao amin'ny Illustrator ary jereo ny maodely
Andao hamorona a antontan-taratasy vaovao. Homena ny latabatra fiasana a Habe A4, amin'izay dia tsy ho diso toerana isika hiasa. Nanova ny loko loko mankany RGB.
Hanomboka amin'ny sary famantarana tsotra izay efa noforoniko teo aloha isika. Raha mijery ity maodely ity dia ho hitantsika tsikelikely ny fomba namoronako azy sy ny fitaovana inona. Ny azy ireo dia ny fanananao hevitra momba ny fomba ahafahanao mahazo tombony betsaka amin'ny tolotra Illustrator. Amin'ny fanaparitahana ny sary famantarana dia hitantsika izany Izy io dia vita amin'ny andiana endrika mitambatra sy lahatsoratra iray.
Mamorona ny endrika ilaina rehetra ao amin'ny Adobe Illustrator
Ny vatan'ny vorondolo
Aleo aloha hifantoka amin'ireo endrika. Ao amin'ny baraovana no hahitanao ny fitaovana endrika. Amin'ny fipihana eo amboniny dia manome antsika safidy hamorona mahitsizoro, ellipses, kintana, polygons na tsanganana tsipika. Amin'ity tranga ity dia mila isika mamorona mahitsizoro. Safidio ny fitaovana ary mitarika ny totozy mamorona mahitsizoro izay eo ho eo ny refy hitanao amin'ny sary etsy ambony.
Ahoana no ahatongavantsika avy amin'ity mahitsizoro ity ho amin'ny endrika mamorona vatan'ny vorondolo? Mila manafay azy isika, ary noho izany dia ananantsika ny fitaovana fifantenana mivantana eo amin'ny biraon'ny fitaovana. Rehefa misafidy azy ianao dia ho hitanao fa eo an-joron'ilay kianja dia karazana entany (ireo faribolana). Raha misintona mivantana ny iray amin'izy ireo ianao dia ho hitanao fa mihodina ny zoro. Raha hikorontana ny zoro tokana, tsindrio fotsiny indray mandeha dia sintomy. Ho hitanao fa mihetsika io zorony io ary ny sisa tavela dia toy ny taloha ihany.
Hanomboka eo amin'ny zoro ambany havia izahay, horaisinay hatramin'ny farany ny famaranana. Hanohy hatrany amin'ny ankavia havia izahay ary amin'ny farany havanana amin'ny farany ambony. Amin'ity fomba ity dia hahazo ny endrika irina ianao.
Ny mason'ny vorondolo
Malalaka hijerena akaiky ilay maodely. Ny maso dia mitovy endrika amin'ny vatana ary ho an'ny faribolana roa, iray ao anaty iray hafa. Hamorona a mahitsizoro kely kokoa ary hataontsika warpTahaka ny nataontsika tamin'ny dingana teo aloha. Ankehitriny, hamorona faribolana izahay. Safidio ny fitaovana ellipse. Mba hamoronana faribolana tonga lafatra dia mila manery ny lakile isika miova mandritra ny fisintomana, raha tsy izany dia azo ovaina izy io ary lasa ellipse kokoa noho ny boribory.
Raha vantany vao manana ny singa rehetra amin'ny masontsika isika dia tonga ny fotoana hanangonana azy. Ho an'ny lahasa famoronana rehetra ataonao ao amin'ny Illustrator ny fitaovana fampifanarahana dia fototra. Mety tsy ho hitanao ilay izy, azonao jerena ao foana varavarankely>milahatra. Hanampy anao hampifanaraka singa samihafa izy io. Azonao atao ny manondro ny solaitrabe, ny fifantenana, na zavatra manan-danja. Mba hampifanarahana anao dia mila misafidy zavatra maromaro ianao ary emisafidiana safidy fampifanarahana. Raha te-hisafidy zavatra iray ianao, ataovy ny safidy tsindrio ilay zavatra tianao hovaina ho zava-dehibe nefa tsy manindry bokotra. Hofidintsika ao anaty ny faritra ivelany amin'ny maso ny mpianatra.
Ataovy avo roa heny ary atsimbadika hamoronana ilay maso hafa
Raha tsikaritrareo dia mitovy ihany ny maso iray hafa fa amin'ny toerana mifanohitra amin'izany. Mba tsy hiverimberenantsika ny fizotrany rehetra dia izay hataontsika dia avo roa heny ilay efa noforonina. Azonao atao amin'ny command + c (copie) ary avy eo commande + v (apetaho) na azonao atao ny misafidy tsindrio ny bokotra safidy ary hisintona. Raha hivadika azy dia kitiho eo, ary ao amin'ny tontonana fananana, ao amin'ny fizarana "manova", amin'ireo marika aseho amin'ny sary etsy ambony, azonao atao ny mamadika ilay endrika, amin'ity tranga ity dia mila mitsivalana isika.
Mamorona elatra amin'ny alàlan'ny mpandeha lalana na penina
Andao hiverina amin'ny endrika lehibe, ho hitanao fa manana karazana elatra izy. Izy io dia mitovy amin'ny endritsika ampiasaintsika amin'ny vatana, apetraka ao aoriantsika ary avadika. Horaisiko io fotoana io hanazavana fitaovana roa tena ilaina amin'ny famoronana logo: ny fitaovan'ny penina sy ny mpandeha.
La fitaovana penina Manana izany ao amin'ny baraovana ianao ary azo ampiasaina hamoronana elatra. Tsotra be ny fampiasana azy. fotsiny kitiho raha hamorona volo ary ho voasarika ho azy ireo tsipika mba hanatevin-daharana azy ireo.
Fomba iray hanamboarana ny elatra koa ny fampiasana ny pathfinder. Raha tsy hitanao hita maso io dia ho hitanao ao amin'ny kiheba fikandrana> mpandalana lalana. Amin'ity fitaovana ity dia azonao atao ny manambatra na manala ampahany. Amin'ity tranga ity dia mila mifidy ny safidy isika: tsy dia aloha loatra. Ataovy avo roa heny ny bikan'ny vatana, apetraho ao ambadiky ny fananganana elatra ary averina averina indray, tsindrio kely kokoa eo aloha ary hamafana ny mihoatra. Efa nanana ny elantsika isika. Vantany vao noforonina ireo endrika rehetra dia azonao atao ny manangona ny sary famantarana.
Loko sy gradient ho an'ny logo anao amin'ny Illustrator
Hatreto dia mbola tsy niresaka momba ny loko izahay. Zava-dehibe fa rehefa mamolavola ny sary famantarana ianao dia mijery ny loko, misafidy feo izay mifanaraka sy maneho ny fanahin'ny marika. Nisafidy mavokely iray aho, avelako ny kaody miloko etsy ambony raha toa ka mety aminao izany. Tsy feno ny maso, izy ireo dia tsipika fotsy misy hatevin'ny 0,25.
Ny faritra mavokely amin'ny vatana dia tsy loko miloko, manana simba. Misy hevitra mifanipaka amin'ny logo misy gradient na tsia. Alohan'ny hampiasana azy ireo dia mety hitranga satria mety ho very ny gradient rehefa mampakatra azy amin'ny tranonkala. Na izany aza, olana iray no resena. Marika maro no mampiasa gradients amin'ny logo, marika fantatry ny Instagram. Tiako manokana izy ireo satria, raha ampiasaina tsara izy ireo, dia ampian'izy ireo mihombo ny sary famantarana.
Raha te hampiasa gradients dia tsy maintsy misafidy ilay gradient tool isika ary tsindrio indroa ilay zavatra. Azontsika atao ny hitsin-dalana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny G amin'ny kitendry ary kitiho indroa. Ao amin'ny tontonana fananana, amin'ny gradient, azonao atao ny misafidy ny karazana gradient ary mampiseho menio hanovana azy amin'ireo teboka telo. Amin'ity tranga ity dia nisafidy gradient iray isika izay avy amin'ny mainty ho fotsy ary novainay ho mavokely ny mainty ary ny fotsy hosoloinay mavokely tena mazava be, saika fotsy. Amin'ny alàlan'ny famindrana ny bara miseho amin'ny endrika sy ny teboka dia azonao atao ny manova ny toerana sy ny firafitry ny gradient.
Typografika amin'ny sary famantarana
Tsy misy fahasarotana ny lahatsoratra, soratana miaraka amin'ny endri-tsoratra Oswlad Medium, izay azonao sintonina maimaim-poana ao amin'ny Google Fonts. Nomena isa 17 ny habe ary nofinidinay ilay feony mavokely mitovy amin'io. Toy izao ny endriny!
Fomba fanamboarana endritsoratra amin'ny Adobe Illustrator
Andao hiresaka bebe kokoa momba ny typography! Azo ovaina ho kapoka ny endritsoratra, vaky, simba ary afaka milalao amin'izy ireo isika. Tsy dia sahy hanao an'io aho, saingy hay, ny famoronana logo dia loharano tsara ary tokony ho fantatrao izany. Andao jerena ohatra iray:
Andao hisafidy ny endritsoratra File Black, ary hanoratra an'ity anarana ity aho. Tahaka ny misy azy ankehitriny, dia kely ny zavatra azontsika atao amin'izany. Mila manova ny typography ho stroke isika. Ho an'izay, mifidy azy amin'ny alàlan'ny fitaovana fifantina izahay ary mankamin'ny takelaka lahatsoratra> mamorona drafitra. Alohan'ny hanaovana izany dia alao antoka fa voasoratra tsara ny lahatsoratra, satria tsy ho azonao atao ny manitsy azy!
Amin'ny famoronana ny drafitra dia azonao atao ny mandray ny lahatsoratrao tahaka ny lozam-pifamoivoizana Illustrator hafa. Tahaka ny efa nataontsika tamin'ny endriny, miaraka amin'ny fitaovana fifantenana mivantana dia hodinihintsika ny faran'ny i ary ny teboka faharoa "i" dia hovaintsika ho karazana ravina, izay homeko ity tononkira turquoise. Ny zavatra mahaliana dia ny teny iray manontolo dia azo ampiasaina ho sary famantarana na ny "i" ho karazana sary tsy miankina.
Hizaha toetra ny logo miaraka amin'ny fanesoana amin'ny Photoshop
Hevitra tsara hijerena raha miasa ny sary famantarana anao dia ny mamorona fanesoana amin'ny Photoshop. Io no fomba tsara indrindra hahitanao haingana ny fomba fijeriny amin'ny zava-misy sy ny fomba fampiharana azy. Ahoana ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba hamoronana sary famantarana amin'ny Adobe Illustrator tsikelikely